သားအိမျပွငျပ၌ သန်ဓတေညျခွငျး | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Mar 12, 2018 Last updated Nov 9, 2019
သားအိမ်ပြင်ပတွင် သန္ဓေတည်ခြင်းဆိုသည်မှာ သန္ဓေအောင်ပြီးသော မျိုးဥသည် သားအိမ်အတွင်းတွင်မဟုတ်ပဲ သားအိမ်ပြင်ပ တစ်နေရာတွင် သန္ဓေတွယ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ သားအိမ်ပြင်ပ၌ သန္ဓေတည်ခြင်းသည် လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ဆယ်မှစ၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်သေဆုံးမှုနှုန်းကိုလည်း များစေသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သားအိမ်ပြင်ပတွင် သန္ဓေတည်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် သားဥပြွန်တွင် သန္ဓေတယ်ခြင်းဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်
-ယခင်ဗိုက်ခွဲ၍ကလေးမွေးထားပါက ချုပ်ရိုးအနာနားတစ်ဝိုက် အစရှိသည့်နေရာများတွင်လည်း သန္ဓေတွယ်လေ့ရှိပါတယ်။
သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေများသော အကြောင်းအရာများမှာ-
-မိန်းမကိုယ်ထဲသို့ သန္ဓေတားပစ္စည်းထည့်ပုံ နည်းစနစ်မမှန်ကန်ခြင်း (သို့) သန္ဓေတားပစ္စည်းထည့်ရာတွင် ပိုးမသန့်ပဲထည့်ခြင်း၊
-ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်း – ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီကတည်းက ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူများသည် သားအိမ်ပြင်ပ၌သန္ဓေတည်ခြင်း ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
-ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသော မိခင်များ၊
-အိမ်ထောင်သက်ကြာသော်လည်း သားသမီးရဖို့ အခက်အခဲရှိနေသူများနှင့် မျိုးပွားစေသောဆေးသောက်သုံးနေသူများ၊
-အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရာတွင် သားဥပြွန်ပျက်စီးသွားခြင်း၊
-သားဥပြွန်ရောင်ခြင်း၊ သားအိမ်အတွင်းနံရံ ရောင်ရမ်းနေခြင်း၊
-ယခင်က သားအိမ်ပြင်ပ၌ သန္ဓေတည်ဖူးသော မိခင်များ၊
-အသက်၃၅နှစ်မှ ၄၄နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးများ အစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
သားအိမ်ပြင်ပ၌ သန္ဓေတည်ခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ သားဥပြွန်ရောင်ရမ်းနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သားဥပြွန် ပျက်စီးနေခြင်း၊ သန္ဓေအောင်ပြီးသား မျိုးဥကို သယ်ဆောင်သည့်လမ်းကြောင်းလွှဲ၍ နေရာလွှဲမှား သန္ဓေတွယ်ကပ်ခြင်းတို့သည်လည်း သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်စေနိုင်သော အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါတယ်။
သားဥပြွန်ရောင်ရမ်းရခြင်းမှာ သားဥပြွန်အတွင်းသို့ Chlamydia, Gonorrhoea အစရှိသော ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သားဥပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် သားဥပြွန်တစ်လျှောက် ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ သားဥပြွန်၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ ပျက်စီးခြင်းတို့ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။
သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်းကြောင့် ကြုံတွေ့ရသော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ ဗိုက်နာခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရှိစ၌ သွေးဆင်းခြင်း သာမန်ကိုယ်ဝန်ရှိသကဲ့သို့ ပျို့အန်ခြင်း၊ ရင်သားနာခြင်း စသည်တို့ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ထိုမျှသာမက ဝမ်းဗိုက်အတွင်းသို့ သွေးစိမ့်ထွက်ခြင်းကြောင့် ရုတ်တရက်ဗိုက်နာခြင်း၊ ပခုံးနာခြင်း၊ သွေးထွက်များ၍ သွေးလန့်ခြင်း (shock) စသည့် ဆိုးရွားသော ရောဂါလက္ခဏာများလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ရောဂါလက္ခဏာများ တွေ့ကြုံပါက နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ အချိန်မီ သွားရောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သားအိမ်ပြင်ပ၌ သန္ဓေတည်ခြင်းသည် သာမန်ကိုယ်ဝန်များကဲ့သို့ ဗိုက်အရွယ်အစား ကြီးထွားလာခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒီအချက်ကိုတော့ သတိထားစေချင်ပါတယ်။
သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း ဟုတ်/မဟုတ်သေချာစွာ သိနိုင်ရန် ပြင်ပစမ်းသပ်မှုများနဲ့တင်မလုံလောက်ပါ။ တစ်ခြားသော အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်ပါတယ်။
– Urine Pregnancy Test (UCG test)- သာမန်ကိုယ်ဝန်ကဲ့သို့ပင် ဆီးစစ်တံဖြင့် စစ်ဆေးကြည့်ပါက ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်း ပြသပါတယ်။
– သွေးထဲတွင် BHCG(Beta HCG) ဟုခေါ်သော ဟော်မုန်းရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးကြည့်ပါက သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်းတွင် ၎င်းဟော်မုန်းသည် သာမန်ကိုယ်ဝန်နှင့်ယှဉ်လျှင် လျော့နည်းနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။
– Transvaginal Ultrasound- မိန်းမကိုယ်ကနေ ထည့်ပြီး ရိုက်ရသော အာထရာဆောင်းသည် ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းတွင် သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် လွန်စွာအရေးပါလှပါတယ်။
အထက်ပါစစ်ဆေးမှုများအပြင် အခြားသော သွေးစစ်မှုများ၊ တခြားသော ဟော်မုန်း level တိုင်းတာမှု များစွာလည်း ပြုလုပ်နိူင်ပါသေးတယ်။ သွေးထွက်လွန်၍ သွေးလန့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အနေအထားဆိုလျှင် အရေးပေါ်ဗိုက်ခွဲ၍ ဆေးစစ်မှုနှင့် ကုသမှုကို တစ်ပြိုင်တည်း ပြုလုပ်လိုက်ရတာမျိူးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ကုသမှုများအနေဖြင့် ဆေးဝါးများဖြင့် ကုသမှုများလည်းရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် laparoscopic surgery ဟုခေါ်သော ချက်နားတစ်ဝိုက် အပေါက်ကလေးဖောက်၍ ကင်မရာတပ်ထားသော ပြွန်ကို ဝမ်းဗိုက်အတွင်းသို့ အပေါက်လေးမှတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းကာ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေ(သို့) စက်ကိရိယာမပြည့်စုံသော အနေအထားတွင် Laparotomy ဟုခေါ်သော ဗိုက်ခွဲ၍ အသေးစိတ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်း အစရှိသည့် ကုသမှုများရှိပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ အသက်အန္တရာယ်အထိ ဆုံးရှုံးနိုင်သော သားအိမ်ပြင်ပ၌ သန္ဓေတည်ခြင်း မဖြစ်စေရန် ဖော်ပြပါ တွေ့ကြုံရသော လက္ခဏာများ၊ ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းအရာများအား သိရှိထားသင့်သည့်အပြင် ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများ၊ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တို့ကိုလည်း သိထားရပါမယ်။ ၎င်းတို့မှာ-
– လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများမဖြစ်ပွားအောင် လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ကွန်ဒုံးကို စနစ်တကျအသုံးပြုပါ။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးပါ။ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် သစ္စာရှိပါ။
– အကယ်၍ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ဖြစ်နေသည်ဟု မိမိကိုယ်ကို သံသယရှိပါက နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ပြီး အချိန်မီကုသမှုခံယူပါ။
– ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုများလေလေ သားအိမ်ပြင်ပ၌ သန္ဓေတည်နှုန်း များလေလေပင်ဖြစ်ပါတယ်။
– မိမိတွင် သားအိမ်ပြင်ပ၌ သန္ဓေတည်နိုင်သော လက္ခဏာများ တွေ့ရှိနေပါက ဆရာဝန်နှင့် မှန်မှန်ပြ၍ ကုသမှုခံယူပါ။
– ယခင်က သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ဖူးသော မိခင်များသည် နောက်ထပ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပါက ကိုယ်ဝန်စရှိစဉ်ကတည်းက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး စောစီးစွာ ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
သားအိမ်ပြင်ပ၌ သန္ဓေတည်ခြင်းသည် မိခင်ရော ကလေးပါ အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်အထိ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ အထက်ပါ ဖော်ပြခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်ပြီး မိမိတွင် တွေ့ကြုံနေရသည်ဟု သံသယရှိပါက စောစီးစွာ ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
အသိနောက်ကျ၍ တန်ဖိုးရှိလှသော အသက်များ မဆုံးရှုံးစေဖို့ ရည်ရွယ်၍ ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
သားအိမျပွငျပတှငျ သန်ဓတေညျခွငျးဆိုသညျမှာ သန်ဓအေောငျပွီးသော မြိုးဥသညျ သားအိမျအတှငျးတှငျမဟုတျပဲ သားအိမျပွငျပ တဈနရောတှငျ သန်ဓတှေယျခွငျးကို ဆိုလိုပါသညျ။ သားအိမျပွငျပ၌ သန်ဓတေညျခွငျးသညျ လှနျခဲ့သောအနှဈနှဈဆယျမှစ၍ ကိုယျဝနျဆောငျမြားတှငျ ဖွဈပှားမှုအမြားဆုံးသော ရောဂါတဈခုဖွဈပါတယျ။ မိခငျသဆေုံးမှုနှုနျးကိုလညျး မြားစသေော ရောဂါတဈခုဖွဈပါတယျ။
သားအိမျပွငျပတှငျ သန်ဓတေညျခွငျးသညျ မြားသောအားဖွငျ့ သားဥပွှနျတှငျ သန်ဓတေယျခွငျးဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ ထို့အပွငျ
-ယခငျဗိုကျခှဲ၍ကလေးမှေးထားပါက ခြုပျရိုးအနာနားတဈဝိုကျ အစရှိသညျ့နရောမြားတှငျလညျး သန်ဓတှေယျလရှေိ့ပါတယျ။
သားအိမျပွငျပ သန်ဓတေညျခွငျး ဖွဈနိုငျခွမြေားသော အကွောငျးအရာမြားမှာ-
-မိနျးမကိုယျထဲသို့ သန်ဓတေားပစ်စညျးထညျ့ပုံ နညျးစနဈမမှနျကနျခွငျး (သို့) သန်ဓတေားပစ်စညျးထညျ့ရာတှငျ ပိုးမသနျ့ပဲထညျ့ခွငျး၊
-ဆေးလိပျသောကျသုံးခွငျး – ကိုယျဝနျမဆောငျမီကတညျးက ဆေးလိပျသောကျသုံးသူမြားသညျ သားအိမျပွငျပ၌သန်ဓတေညျခွငျး ပိုမိုဖွဈပှားနိုငျခွရှေိပါတယျ။
-ဖနျပွှနျသန်ဓသေားဖွငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျထားသော မိခငျမြား၊
-အိမျထောငျသကျကွာသျောလညျး သားသမီးရဖို့ အခကျအခဲရှိနသေူမြားနှငျ့ မြိုးပှားစသေောဆေးသောကျသုံးနသေူမြား၊
-အကွောငျးတဈစုံတဈရာကွောငျ့ ခှဲစိတျမှုပွုလုပျရာတှငျ သားဥပွှနျပကျြစီးသှားခွငျး၊
-သားဥပွှနျရောငျခွငျး၊ သားအိမျအတှငျးနံရံ ရောငျရမျးနခွေငျး၊
-ယခငျက သားအိမျပွငျပ၌ သန်ဓတေညျဖူးသော မိခငျမြား၊
-အသကျ၃၅နှဈမှ ၄၄နှဈအတှငျး အမြိုးသမီးမြား အစရှိသညျတို့ဖွဈပါတယျ။
သားအိမျပွငျပ၌ သန်ဓတေညျခွငျး၏ အဓိကအကွောငျးအရငျးမှာ သားဥပွှနျရောငျရမျးနခွေငျးပငျဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သားဥပွှနျ ပကျြစီးနခွေငျး၊ သန်ဓအေောငျပွီးသား မြိုးဥကို သယျဆောငျသညျ့လမျးကွောငျးလှဲ၍ နရောလှဲမှား သန်ဓတှေယျကပျခွငျးတို့သညျလညျး သားအိမျပွငျပ သန်ဓတေညျစနေိုငျသော အကွောငျးအရာမြားဖွဈပါတယျ။
သားဥပွှနျရောငျရမျးရခွငျးမှာ သားဥပွှနျအတှငျးသို့ Chlamydia, Gonorrhoea အစရှိသော ဘကျတီးရီးယားပိုးမှားမြား ဝငျရောကျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ သားဥပွှနျရောငျရမျးခွငျးကွောငျ့ သားဥပွှနျတဈလြှောကျ ပိတျဆို့ခွငျး၊ သားဥပွှနျ၏ လုပျငနျး ဆောငျတာမြား ပကျြစီးခွငျးတို့ကိုလညျး ဖွဈစနေိုငျပါသေးတယျ။
သားအိမျပွငျပသန်ဓတေညျခွငျးကွောငျ့ ကွုံတှရေ့သော ရောဂါလက်ခဏာမြားမှာ ဗိုကျနာခွငျး၊ ကိုယျဝနျရှိစ၌ သှေးဆငျးခွငျး သာမနျကိုယျဝနျရှိသကဲ့သို့ ပြို့အနျခွငျး၊ ရငျသားနာခွငျး စသညျတို့ ခံစားရတတျပါတယျ။ ထိုမြှသာမက ဝမျးဗိုကျအတှငျးသို့ သှေးစိမျ့ထှကျခွငျးကွောငျ့ ရုတျတရကျဗိုကျနာခွငျး၊ ပခုံးနာခွငျး၊ သှေးထှကျမြား၍ သှေးလနျ့ခွငျး (shock) စသညျ့ ဆိုးရှားသော ရောဂါလက်ခဏာမြားလညျး ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ထိုကဲ့သို့ ရောဂါလက်ခဏာမြား တှကွေုံ့ပါက နီးစပျရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးသို့ အခြိနျမီ သှားရောကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ သားအိမျပွငျပ၌ သန်ဓတေညျခွငျးသညျ သာမနျကိုယျဝနျမြားကဲ့သို့ ဗိုကျအရှယျအစား ကွီးထှားလာခွငျးမရှိပါဘူး။ ဒီအခကျြကိုတော့ သတိထားစခေငျြပါတယျ။
သားအိမျပွငျပ သန်ဓတေညျခွငျး ဟုတျ/မဟုတျသခြောစှာ သိနိုငျရနျ ပွငျပစမျးသပျမှုမြားနဲ့တငျမလုံလောကျပါ။ တဈခွားသော အသေးစိတျစဈဆေးမှုမြား လိုအပျပါတယျ။
– Urine Pregnancy Test (UCG test)- သာမနျကိုယျဝနျကဲ့သို့ပငျ ဆီးစဈတံဖွငျ့ စဈဆေးကွညျ့ပါက ကိုယျဝနျရှိကွောငျး ပွသပါတယျ။
– သှေးထဲတှငျ BHCG(Beta HCG) ဟုချေါသော ဟျောမုနျးရှိ၊ မရှိစဈဆေးကွညျ့ပါက သားအိမျပွငျပသန်ဓတေညျခွငျးတှငျ ၎င်းငျးဟျောမုနျးသညျ သာမနျကိုယျဝနျနှငျ့ယှဉျလြှငျ လြော့နညျးနကွေောငျး တှရှေိ့ရပါလိမျ့မယျ။
– Transvaginal Ultrasound- မိနျးမကိုယျကနေ ထညျ့ပွီး ရိုကျရသော အာထရာဆောငျးသညျ ကိုယျဝနျအစောပိုငျးတှငျ သားအိမျပွငျပသန်ဓတေညျခွငျး ဟုတျ၊ မဟုတျ ဆုံးဖွတျရာတှငျ လှနျစှာအရေးပါလှပါတယျ။
အထကျပါစဈဆေးမှုမြားအပွငျ အခွားသော သှေးစဈမှုမြား၊ တခွားသော ဟျောမုနျး level တိုငျးတာမှု မြားစှာလညျး ပွုလုပျနိူငျပါသေးတယျ။ သှေးထှကျလှနျ၍ သှေးလနျ့ခွငျး ဖွဈပျေါနသေညျ့ အနအေထားဆိုလြှငျ အရေးပျေါဗိုကျခှဲ၍ ဆေးစဈမှုနှငျ့ ကုသမှုကို တဈပွိုငျတညျး ပွုလုပျလိုကျရတာမြိူးလညျး ရှိတတျပါတယျ။
ကုသမှုမြားအနဖွေငျ့ ဆေးဝါးမြားဖွငျ့ ကုသမှုမြားလညျးရှိပါတယျ။ ထို့အပွငျ laparoscopic surgery ဟုချေါသော ခကျြနားတဈဝိုကျ အပေါကျကလေးဖောကျ၍ ကငျမရာတပျထားသော ပွှနျကို ဝမျးဗိုကျအတှငျးသို့ အပေါကျလေးမှတဈဆငျ့ ထညျ့သှငျးကာ ခှဲစိတျကုသခွငျး၊ အရေးပျေါအခွအေနေ(သို့) စကျကိရိယာမပွညျ့စုံသော အနအေထားတှငျ Laparotomy ဟုချေါသော ဗိုကျခှဲ၍ အသေးစိတျခှဲစိတျကုသခွငျး အစရှိသညျ့ ကုသမှုမြားရှိပါတယျ။
ထိုကဲ့သို့ အသကျအန်တရာယျအထိ ဆုံးရှုံးနိုငျသော သားအိမျပွငျပ၌ သန်ဓတေညျခွငျး မဖွဈစရေနျ ဖျောပွပါ တှကွေုံ့ရသော လက်ခဏာမြား၊ ဖွဈစနေိုငျသော အကွောငျးအရာမြားအား သိရှိထားသငျ့သညျ့အပွငျ ကာကှယျရနျနညျးလမျးမြား၊ ဆောငျရနျ၊ ရှောငျရနျတို့ကိုလညျး သိထားရပါမယျ။ ၎င်းငျးတို့မှာ-
– လိငျမှတဈဆငျ့ ကူးစကျတတျသော ရောဂါမြားမဖွဈပှားအောငျ လိငျဆကျဆံတိုငျး ကှနျဒုံးကို စနဈတကအြသုံးပွုပါ။ တဈလငျတဈမယားစနဈ ကငျြ့သုံးပါ။ မိမိအိမျထောငျဖကျအပျေါ သစ်စာရှိပါ။
– အကယျ၍ လိငျမှတဈဆငျ့ ကူးစကျတတျသောရောဂါမြား ဖွဈနသေညျဟု မိမိကိုယျကို သံသယရှိပါက နီးစပျရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးသို့ သှားရောကျပွီး အခြိနျမီကုသမှုခံယူပါ။
– ဆေးလိပျသောကျခွငျးကို ရှောငျကွဉျပါ။ ဆေးလိပျသောကျသုံးမှုမြားလလေေ သားအိမျပွငျပ၌ သန်ဓတေညျနှုနျး မြားလလေပေငျဖွဈပါတယျ။
– မိမိတှငျ သားအိမျပွငျပ၌ သန်ဓတေညျနိုငျသော လက်ခဏာမြား တှရှေိ့နပေါက ဆရာဝနျနှငျ့ မှနျမှနျပွ၍ ကုသမှုခံယူပါ။
– ယခငျက သားအိမျပွငျပသန်ဓတေညျဖူးသော မိခငျမြားသညျ နောကျထပျကိုယျဝနျဆောငျပါက ကိုယျဝနျစရှိစဉျကတညျးက ဆရာဝနျနှငျ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးပွီး စောစီးစှာ ဆေးကုသမှုခံယူသငျ့ပါတယျ။
သားအိမျပွငျပ၌ သန်ဓတေညျခွငျးသညျ မိခငျရော ကလေးပါ အသကျဆုံးရှုံးသှားနိုငျသညျအထိ အန်တရာယျရှိပါတယျ။ အထကျပါ ဖျောပွခဲ့သော အကွောငျးအရာမြားကို သိရှိနားလညျပွီး မိမိတှငျ တှကွေုံ့နရေသညျဟု သံသယရှိပါက စောစီးစှာ ဆေးကုသမှုခံယူသငျ့ပါတယျ။
အသိနောကျကြ၍ တနျဖိုးရှိလှသော အသကျမြား မဆုံးရှုံးစဖေို့ ရညျရှယျ၍ ရေးသားလိုကျရပါသညျ။
ကလေးငယျမြားကို အားဆေးတိုကျသငျ့/မတိုကျသငျ့ ဘယျလိုဆုံးဖွတျကွမလဲ?
ကလေးငယျမြား ကိုယျပူနစေဉျ ရပေတျတိုကျသငျ့သလား၊ အစာကြှေးသငျ့သလား?
မှေးကငျးစကလေးငယျလေးမြား နို့အနျလြှငျ စိုးရိမျရပါသလား
ကလေးငယျမြား ကိုယျပူနစေဉျ ရပေတျတိုကျသငျ့သလား၊ …